Tauon Music Bhokisi: A Music Player yeArch Linux Unofanira Kuedza | Kubva kuLinux
Tauon Music Bhokisi: A Music Player yeArch Linux Unofanira Kuedza
Isu tinoenderera mberi kuyedza maturusi anotendera vashandisi vedu kuvandudza mashandiro avo uye kugadzirisa zvido zvezuva nezuva Panguva ino kwaive kuchinjika kwe Tauon Music Bhokisi chii chiri mumhanzi mutambi weArch Linux Chisingazivikanwe zvishoma asi chakazara nezvinhu zvinogona kukodzera vese vadzidzisi uye vashandisi vekare.
1 Chii chinonzi Tauon Music Bhokisi?
2 Tauon Music Bhokisi Zvimiro
3 Maitiro ekuisa Tauon Music Bhokisi
Chii chinonzi Tauon Music Bhokisi?
Tauon Music Bhokisi Ndicho mumhanzi mutambi weArch Linux Vhura sosi, yakagadzirwa muPython uchishandisa raibhurari yekuteerera yeBASS, iyo inotibvumidza kutamba chero mhando reodhiyo faira rakachengetwa pakombuta yedu.
Icho chishandiso chine yakapusa interface, iri nyore kudzidza uye inogamuchirwa kushandisika, ine yakasarudzika generic kumisikidzwa iyo inosimbiswa nekumisikidza kune vetsika vashandisi.
Yayo yekutamba uye mashandiro ayo menyu ndeyechinyakare, ine huwandu hukuru hwekhibhodi mapfupi, rutsigiro rwekutamba, kupinza mimhanzi kubva kune yekutamba, kutsvaga nekukurumidza, pakati pevamwe.
Tauon Music Bhokisi Zvimiro
Tauon Music Bhokisi rinouya rakatakura akasiyana maficha kuitira kuti vashandisi vayo vanzwe kugadzikana neyechizvino, yakapusa asi yepamusoro-inoshanda mutambi. Pakati peakakosha maitiro atinogona kutaura:
Rutsigiro rwakakura rwe akasiyana mafomati ekutamba aripo akadai seMP3, FLAC, OGG, OPUS uye APE.
Dhonza uye udonhedze mashandiro ekuridza rwiyo.
Yakanakisa playlist manejimendi, ine yekutsvaga uye yemhando maficha.
Nhoroondo yenziyo dzakaridzwa.
Album screen inoratidza paunenge uchitamba rwiyo.
Kubatanidzwa neLast.fm services
Rwiyo rwemhanzi muoni pamwe nekubatanidzwa kune iyo LyricWiki chikuva.
Iyo inobvumidza kuunza kunze nekuchengetedza zvinyorwa zvinyorwa muXSPF fomati.
Icecast uye Shoutcast inoyerera kutamba.
Zvimwe zvinhu zvakawanda zvauri kuda.
Maitiro ekuisa Tauon Music Bhokisi
Kuiswa kweizvi mumhanzi mutambi weArch Linux Izvo zvinoitwa nenzira yakapusa, ingo tevera unotevera kuraira uye isu tinotanga kunakidzwa.
Tauon Music Bhokisi Pasina mubvunzo mutambi akapusa, anogona kuve anodikanwa nevamwe vashandisi, kana iwe uchida chimwe chinhu chiri nyore, nekuenderana kwakanakisa nemafomati mazhinji azvino nekusanganiswa neesevhisi dzambotaurwa, inguva yekuyedza ichi chakanakisa mutambi wemimhanzi weArch Linux.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » GNU / Linux » Tauon Music Bhokisi: A Music Player yeArch Linux Unofanira Kuedza
Ini ndinofunga zvingave zvakanaka kutaura kuti pasuru iri muAUR uye kuti kune vashandisi veyourt iwo murairo ndewekuti. Yaourt haisiriyo wega unofficial package maneja / AUR, kune zvakare aura, pacaur, pakati pevamwe.
Nei kusarudzika "YeArch Linux"?
dzvinyu ndapota ita tuto kuisa mailserver mu archlinux ne postfix + squirrelmail
Pindura kuna Arkan
Iko kutove nechinyorwa chakazara kwazvo na federico Postfix + Dovecot + Squirrelmail nevashandisi vemuno - SME Networks Ndinokukoka kuti unakirwe nekuverenga
Iris: inokurumidza Webhu Sisitimu yekukudziridza mu GO mutauro